Uhhafu Wezinkampani Ovotelwe unekhasi le-Google + | Martech Zone
Uhhafu Wezinkampani Ezivotelwe unekhasi le-Google +
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 18, 2012 Douglas Karr
Sigijime a I-Zoomerang poll kubha yethu eseceleni emasontweni ambalwa edlule ukuthola isithombe esicacile sokuthi zingaki izinkampani ezamukele ikhasi le-Google +. Imiphumela ye-poll yehlukaniswe kahle… abafundi abangama-50% kuphela abathi inkampani yabo inekhasi le-Google +. Yize lokho kungabonakala kuphansi, ngicabanga ukuthi izinombolo zangempela zingaphansi kakhulu. Ngangingenathemba lokuthi abaningi babenabo.
Njengoba besifuna izimbangi zamakhasimende ethu, besivame ukungabatholi ku-Google + futhi ngesinye sezizathu esenza sibakhuthaze ukuthi babe lapho. Nasi isibonelo selinye lamakhasimende ethu, i-Lifeline, ene- isikhungo sedatha esikhulu kunazo zonke phakathi ne-midwest. I-VP yabo Yezentengiso ibilokhu ikhipha okuqukethwe okujwayelekile futhi iheha abalandeli abahle.
Okuhlangenwe nakho kwethu kusikhombisile ukuthi ukutholwa kwangaphambi kwesikhathi kuholele ekukhuleni okusheshayo uma kukhulunywa ngezokuxhumana. Akukona ukuthi uzonqoba empini namhlanje… kepha uma isayithi yokuxhumana nabantu iqala ukusebenza, ukutholwa kwakho kwasekuqaleni kukwenze waba ngumholi lapho. Ku-Google +, lapho ngifuna izikhungo zedatha, kunemiphumela embalwa kuphela. Eyokuqala yiLifeline, elandelayo yinkampani yokwakha imininingwane, kanti eyokugcina yinkampani yaseCanada Data Center.
Lezi izindaba ezinhle kuDoug nethimba lakhe eLifeline. Sekuvele kunezigidi zabasebenzisi ku-Google + iningi labo elakha amanethiwekhi abo. Njengoba kungekho mncintiswano, uDoug angabamba abanye abalandeli bokuqala okungenzeka ukuthi wayengafinyelelanga ngaphambili futhi atshale ifulegi lakhe emhlabathini njengochwepheshe ocabanga phambili, oxhumeke kahle kwiDatha Center. Lesi isinyathelo esingahle sibeke i-Lifeline kahle embonini, hhayi iqhinga elinembuyiselo ngokushesha ekutshalweni kwezimali.
Ngabe ucwaninge umncintiswano wakho ku-Google +? Ngabe izimbangi zakho sezivele zisetha isitolo neziphathimandla zokwakha kule nethiwekhi yokuxhumana nabantu enokukhula okuqinile futhi okungenzeka ukuthi ngelinye ilanga inikeze i-Facebook imali yayo? Kufanele ukhumbule ukuthi akumayelana wena, kumayelana nokuthi izithameli zakho zikuphi. UDoug uthole ezinye zezethameli zakhe ku-Google +. Kufanele ucabange ngokuthola okwakho lapho, futhi!
Tags: indawo ye-googlegoogle plusikhasi lokuhlanganisa le-googleGoogle +
Yini i-AuthorRank nokuthi kungani kubalulekile